ခက်မ(၅)ဖြာ နှစ်တပါတ်လည်သောအခါ (အပိုင်း-က) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » ခက်မ(၅)ဖြာ နှစ်တပါတ်လည်သောအခါ (အပိုင်း-က)
ခက်မ(၅)ဖြာ နှစ်တပါတ်လည်သောအခါ (အပိုင်း-က)
Posted by maungmoenyo on Feb 24, 2012 in Contributor, Columnist, Politics, Issues | 23 comments
ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ဆုံဒေသဆည်ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေးရပ်ဆိုင်းသည့်ကိစ္စမှစ၍ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလိုလိုလွှတ်ပေးခြင်းကိစ္စ၊ ပြည်သူတို့၏ အနာဂါတ်မျှော်လင်ချက် ကို ပုံဖေါ်ပေးနိုင်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ပေးယုံမက သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် မိမိဇနီးနှင့်အတူရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းတို့သည်. မြန်မာပြည်သူအများ ကို မျှော်လင့်ချက်အသစ်များ ဖန်တီးပေးသည့် ကာလတခုသို့ချင်းနင်းဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်း နှင့် ပြည်သူတရပ်လုံးက သတိမူမိချိန်ဟုဆိုရပါမည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် သမ္မတသစ်အဖြစ်ကျမ်းကြိမ်ဆို စဉ်ကေ၇လဲနှင့်သုံးခဲ့သော good governance ဟူသော ဝေါဟာရသစ်တခု သည်လည်းမြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကတွင်းချင်းနင်းဝင်ရောက်နေရာယူပြီး အတော်ရေပန်းစားခဲ့ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီသိုရောက်နေသော အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမား မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ဖုံးစကားပြောရာကစ၍ မြန်မာနှင်(့အထူးသဖြင့်)အနောက်နိုင်ငံတို့၏ ဆက်ဆံရေးသည်တမဟုတ်ချင်းပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်းအမေရိကန်မှ အဆင့်အမြင့်ဆုံးရာထူးရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သာမက၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ဥရောပသမဂ္ဂ ၀င်နိုင်ငံများမှ ထိပ်ပိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော် နေပြည်တော်တွင် ခြေလှမ်းပျားပန်းခတ်နေသောအချိန် ဟုဆိုရမည်ပင်။ အတိုက်အခံ National League for Democracy ၏ ယခင်ရပ်တည်ချက်ဖြစ်သော ရွှေဂုံတိုင် declaration အရ စစ်အစိုးရ၏ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်ခဲ့သော သံမဏိဆုံးဖြတ်ချက် ကို NLD ခေါင်းဆောင်က ဖျက်သိမ်းကာ ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်မည့်အကြောင်းကြေငြာ လိုက်သည်နှင့် ပါတီတရပ်လုံးသာမက ပြည်သူတရပ်လုံးကသောင်းသောင်းဖျဖျ သြဘာပေးခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်စုကလည်း သူမအနေနှင့် ဦးသိန်းစိန်အပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြောင်း၊ လူထုအားလုံးက လိုလားသောအချက်များအားလုံး နေ့ချင်းညခြင်းမဖြစ်နိုင် သည်တို့ကိုသည်းခံတတ်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်း ဖျောင်းဖျခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအနေနှင့် ပြည်ပသတင်းဌာနနှင့်ပထမဆုံးပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံပွဲတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကမိမိအစိုးရအနေဖြင့် အများကိုလိုက်လျောသည့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ မကြုံစဖူးလုပ်ခဲ့ပေးသလို အနောက်နှင့် အမေရိက ကလည်း လက်ရှိ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခြင်းများကို ရုတ်သိမ်းပေးရန်တာဝန်သာ ရှိတော့ကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။ ဦးသိန်းစိန်က The Washington Post နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုသည် အစိုးရကိုမထိခိုက်ဘဲ ပြည်သူကိုသာ ထိခိုက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သော်လည်း၊ အမှန်တကယ်ထိခိုက်သူများကား ယခင်အစိုးရနားတွင် ၀န်းရံနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ဖြစ်ပြီးအထိနာဆုံဖြစ်သည် ဆိုသည်ကား အထင်အရှားပင်။ အတိုက်အခံများနှင့် အမေရိကအပါအ၀င် အများကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဟူသမျှကို အစိုးရ၏လုပ်ရပ်ခြေလှမ်းများတိုးတက်သွက်လက်လာသည်နှင့် အညီသာ တဆင့်ပြီးတဆင့် လှျေ့ာချသင့်ကြောင်းမြင်ကြသည်။ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုကိုဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဟု ပထမဆုံးကြေငြာလိုက်သောအဖွဲ့ကား ဥရောပသမဂ္ဂဖြစ်သည်။ ယင်းကြေငြာချက်နှင့်အတူ ယူရိုငွေငွေ သန်း(၁၅၀) ချေးငှားမည့်မင်္ဂံလာသတင်းကိုတဆက်တည်းကြားကြရသည်။
ခက်သည်ကား ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်အတွင်း “နာဂစ်”မုန်တိုင်းကြောင့်တနိုင်ငံလုံးနီးပါးကြိမ်မီးအုံမျှ ပူးဆွေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ချိန်၊ အတင်းအဓမ္မနည်းဇြင့် အတည်ပြုခဲ့သော နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းမမှီသော ဖွဲံစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏အားနဲချက်များ၊ ယင်းဥပဒေနဲ့အညီ ကျင်းပခဲ့သောရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံတိုင်းလိုလို “ကြိုတင်မဲ”ဟူသော အစီအမံဖြင့် ဘယ်ကမသိရောက်ရှိလာသော စုပြုံမဲများအရပေါ်ထွက်လာသော အစိုးရသစ်ကို ပြည်သူနှင့်တကွ တကမ္ဘာလုံးက ယုံကြည်နိုင်မှုမရှိသေးချိန်ပင်။ ယင်း အတိပ်အရိပ်မဲကြီး၏လွှမ်းမိုးမှုကို အစိုးရသစ်က အမွေခံယူထားရသည်။ လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ယခင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များမှ ခေါင်းမာသူတယူသန်များ နေရာယူထားဆဲဆိုသော ကြောင့်ကျစိတ်က လူထုကို လွှမ်းမိုးဆဲဖြစ်သည်။ အခြေခံဥပဒေ၏ ပြဌာန်းချက်များက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ မိမိနှင့်မိမိ မိသားစု အနားယူချိန် လုံခြုံစိတ်ချစေရေးနှင့် ၄င်းတို့၏အနာဂါတ်ကံကြမ္မာကောင်းမွန်စေရေးအစီအမံသက်သက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်ယူကြယုံမက ယင်းဆိုးမွေကို ကိ်ု မြန်မာပြည်သူ သန်း(၆၀) ကခါးစီးခံလိုက်ရသည်ဟု လေ့လာသူတချိုကဆိုကြသည်။ တပ်မတော်အပေါ်လူထုယုံကြည်မှု (၀ါ) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ထူထောင်ခဲ့သော hero များအဖြစ်လူထုကပြန်မြင်လာရေးမှာ လတ်တလောအခြေအနေတွင်မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ တပ်က လွှတ်တော်အတွင်း (၂၅%) မျှ အလို လျောက်နေရာယူနေမှုက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကို ကမ္ဘာက ကြီးစွာသောသံသယကိုတိုးပွားနေစေသေးသည်။ အမှန်ပြောရလျင် အထင်သေးနေစေသေးသည် မဟုတ်ပါလား။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေမြေသဘာဝအရ စစ်တပ်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ဟူသောအတွေးအခေါ်ကို အုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက်က ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းစေခဲ့သည်ကား အထင်အရှားပင်။ မိမိအာဏာတည်မြဲရေးတွင် စစ်တပ်အပေါ် အာဏာချုပ်ကိုင်နိုင်မှုကအဓိကအသက်သွေးကြော ဖြစ်ကြောင်း သွားလေသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက ကောင်စွာနမူနာပြခဲ့ပေသည်။ စစ်အဆောက်အအုံကို မလိုအပ်ဘဲ ကြီးထွားလာအောင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တိုးခဲ့လာခြင်းက၊ နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အချိုးကျစွာ နှေးကွေးသွားစေသည့်သာဓကများ နိုင်ငံတကာတွင်ထင်ရှားစွာတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ “ပြည်သူသည်သာအမိ၊ ပြည်သူသည်သာအဖ” ဟူသော တပ်မတော်၏ဆောင်ပုဒ်ကို မသိမသာဘေးခေါက်ထားပြီး “တပ်မတော်သာအမိ၊ တပ်မတော်သာအဖ” ဟူသော ကြွေးကြော်ချက်ဖြင့်အစားထိုး၍ မျက်စေ့မှိတ် ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခဲ့သည့် စစ်တပ်၏အသိတရားကား ပြည်သူတို့၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတားဆီးနေဆဲပင်။ လူထုကိုမြင်လျင် တစ်စိမ်းကဲ့သို (၀ါ) မယုံကြည်ထိုက်သောသူ အဖြစ်မြင်စေရန်၊ စစ်တပ်နှင့် ပြည့်သူကြား ဧရာမတံတိုင်းကြီးတားထားလိုက်သည့်အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အမြင်မှန်ရလာရေးမှာ အချိန်အတော်ယူမည်မှာအမှန်။ ပြည်သူတို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်လို ကိစ္စမျိုး၊ ရပ်ထဲရွာထဲ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူတို့၏နေ့တဓူဝလိုအပ်ချက်ကိစ္စမျိုးတွင် စစ်တပ်မှ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပါဝင်ကူညီလာသည့်အဖြစ်မျိုးများအတော်များများ၊ နေရာဒေသများများတွင်တွေ့လာရမှ ပြည်သူ့သဘောထားဆက်ဆံမှုပြောင်းလာနိုင်မည်။ သတင်းစာမီဒီယာတို့တွင်ဖေါ်ပြကောင်းယုံ လန်ကြုတ်မဟုတ်သော၊ တကယ်စင်စစ် ပြည်သူကိုကူညီစောင့်ရှောက်မှုများလုပ်ကြရန်လိုအပ်လာသည်။ ပြည်သူ့နီတိကိုကောင်စွာနားလည်သဘောပေါက်လိုက်နာသော စစ်သားများဖြစ်လာရေးအတွက် စစ်တပ်အကြီးအကဲများက တပ်တွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ပြုလုပ်လာကြရန်လိုသည်။ ထို့အပြင် စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံများကိုလည်း professional ကိုအခြေခံသော ၀န်ထမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အင်အားလျှောချ၍ ကျစ်လစ်ခိုင်မာအောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ လူထုနှင့်စစ်တပ်တသားတည်း မြင်ရန် နှစ်ဘက်လုံးကကြိုးစားကြရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလွတ်လပ်စွာကိုင်တွယ်စီမံခန့်ခွဲသည် ဆိုသည်ထက် သမ္မတက ခန့်အပ်ယုံမက အစိုးရအဖွဲ့၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ပြောင်းလဲထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။ တပ်ကိစ္စတပ်တွင်းလွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသော လက်ရှိအခြေခံဥပဒေ၏ပြဌာန်းချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်၍ပြင်သင့်လျင် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ တပ်မတော်တာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်ဆိုသည်မှာလည်း၊ သမ္မတကို တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံသည်ထက်အစိုးရအဖွဲ့ကိုတာဝန်ခံသည့်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အသွင်ပြောင်း၇န်လိုအပ်လာပါသည်။ သမ္မတသည်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အားလုံ၏သေနာပတိအဖြစ် အခြေခံဥပဒေက အာဏာအပ်နှင်းသင့်ပေသည်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိစ္စများတွင် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီအမည်ခံ “ကာ/လုံ” ၏အခန်းကဏ္ဍသည်လည်း အဓိကအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သမ္မတနှင့် ကာ/လုံ အကြား အာဏာလွန်ဆွဲမှုများရှိကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့၏အစီအမံများမှာ အစီအစဉ်တကျ တန်းစီ ဆောင်ရွက်သွားသော သာဓကများကိုတွေ့ရသည်။ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တပ် အကြီးအကဲများအတွင်း ကာလအတန်ကြာကပင် စည်းဝါးရိုက်ထားပြီးမှ အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်လာပုံရသည်။ မီဒီယာနှင့် ရပ်ရွာတွင်း အချေအတင်ဖြစ်သော လက္ခဏာများ မတွေ့ခဲ့ရပေ။ သေချာသည်ကတော့ လူထုနှင့် နိုင်ငံတကာအပါအ၀င် အတိုက်အခံများစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရေး ပြုလုပ်ပေးသည့် အပြောင်းအလဲများသည် လွယ်လွယ်နှင့် ထွက်လာသော အဖြေများ၊ အပြောင်းအလဲများမဟုတ်သည်ကတော့သေချာလှပေသည်။ သမ္မတက လက်ရှိပြုလုပ်နေသော အပြောင်အလဲများ ကိုရပ်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်ရန်ဆိုသည်မှာ မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း ဗြောင်ဖွင့်ပြောခဲ့သည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ မကြာမတင်သောရက်တွင်း ထိုင်းနိုင်ငံပြည့်ပခရီးတွင် ယင်းအဆိုကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုသော၊ အစိုး၇အဖွဲ့ကိုထောက်ခံသည့် မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် ကိုကျေနပ်ဝမ်းမြောက်ဘွယ်ကြားကြရသည်။
အစိုးရအဖွဲ့၏တမူထူးခြားချက်တခုကား ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကဲ့သို့သောဝန်ကြီးဌာနများတွင် လူထုနှင့်တန်းတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရသော အခြေခံလူတန်းစားကြားမှပေါက်ဖွားလာကြသူ ပညာရှင်များကို နေရာပေးထားသည်ကို ၀မ်းမြောက်ဘွယ်တွေ့ရသည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ထူထောင်ရေးတွင်ပညာတတ်များ ကိုပေါ်လစီရေးဆွဲချမှတ်နိုင်သော ရာထူးနေရာများမပေးနိုင်သေးသရွေ့ မတိုးတက်နိုင်။ နိုင်ငံကိုချစ်ပါသည်ဟု ကြွေးကျော်နေယုံဖြင့် လူတန်းစေ့နေနိုင်သော နိုင်ငံကြီးဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ခေတ်ပညာတတ်များများ နေရာပေးနိုင်ပြီး တတ်ကြွမ်းမှုဆိုင်ရာအထောက်အကူနှင့် ပြည်ပတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀င်ရောက်လာရေးများကား အခရာကျသော လိုအပ်ချက်များပင်။ ယင်းကို လက်ရှိအစိုးရတဖွဲ့လုံးက အူလှိုက်လည်းလှိုက် လက်မခံနိုင်သရွေ့၊ အရာရာကို ပြည်တွင်း၏အားပြည်တွင်းမှာရှိသည်ဟူသော ခေတ်နောက်ပြန်အတွေးဖြင့် မျက်စေ့မှိတ်အော်နေကြသေးသရွေ့ ယင်းလိုအပ်ချက်များ ၀င်ရောက်လာမည်မဟုတ်။ ဆက်လက်တွေ့နေရသော မြင်ကွင်းဟောင်းများကား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ နှင့် ထိပ်ပိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကသာ လမ်းညွှန်မိန့်ကြားမှုများပြုလုပ်နေသေးခြင်း၊ အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သော နေ့ကြီးရက်ကြီးအခမ်းအနားမျာ၊ အစည်းအဝေးများတွင်မိမိတို့ကသာ နေရာယူဆောင်ရွက်ကျင်းပသော သတင်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ လွတ်လပ်သောဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဟု ဆိုထားသော်လည်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စက်မှုလက်မှု၊ သစ်တောရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးလည်ပါတ်မှု၊ အားကစား၊ သတ္တုလုပ်ငန်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သမ၀ါယမ စသောလုပ်ငန်းများသာမက ဘာသာရေးကိစ္စများတွင် အကျအနနေရာယူ ၍ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နေခြင်း များကိုရှောင်ရှားရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ယင်းရုပ်ပြထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုများ များများနှင့်မြန်မြန် လျှော့ချသင့်ပေသည်။ တိုးတက်သော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ကျင့်သုံးသော ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရ ဖက်စပ်ကြိကြပ်စီမံခန့်ခွဲသော လွတ်လပ်သော စီးပွားရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲသင့်ပေသည်။ အစိုးရ၏တာဝန်ကား ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာအောင် သက်ဝင်လာအောင်တွန်းအားပေးခြင်း၊ မလိုက်နာပါက အရေးယူခြင်းများသာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်မဟုတ်ပါလား။
ငွေရေးကြေးရေး နှင့် အခွန်ဘဏ္ဍာအချိုးမျှတရေးကား အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်လာသော ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း အစိုးရသစ်ကကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီဟုဆိုရပါမည်။ IMF နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲအစည့်းပညာရှင်များပြုလုပ်ဆဲဆွေးနွေးညှီနှိုင်းမှုများ၊ ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းအားနဲချိန်ကို အချိန်ကောင်းယူ၍ ပြည်ပနေများထံမှ ၀င်ငွေခွန်ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်များ ကြေငြာခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခွန်များနှင့်တားမြစ်ချက်များလျှောချပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်း ရှိဆန်အပါအ၀င် ကုန်ပစ္စည်းကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုစနစ် တပြေးညီဖြစ်စေ၇န်သတ်မှတ်ခြင်း၊ မလိုလားအပ်သော၊ ဒေသအလိုက် လူထုအပေါ်ငွေကြေးတားဆီးကောက်ခံခြင်းများ ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းများနှင့် ရုံ့းကိစ္စရပ်များတွင် မတရားလာဘ်ငွေတောင်းခံမှု အလှူမတရားခံမှုများတိုင်တန်းနိုင်ရန် အစီအမံများဖန်တီးပေးခြင်းများ ဆက်တိုက်လုပ်လာပေးခြင်းတို့ကိုတနှစ်တာကာလအတွင်းတွေကြရသည်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာစီးဆင်းမှု ရှင်းလင်းတိကျစေ၇န်၊ တခုတည်းသော ငွေလဲနှုန်းစနစ်သတ်မှတ်နိုင်ရန်တို့ကား ဦးစားပေးကိစ္စများအဖြစ် နောင်လာမည့် အာဆီယံ chairmanship နှင့် SEAP အားကစားပွဲတော်အမှီ တာစူပြုပြင်ရမည့်အခြေခံ ကောင်းများ အမြန်မှန်ဖန်ိတီးရေးတို့ကိုအားသွန်ခါန်စိုက်လုပ်နေချိန် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကို ကက်ဘိနက်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရေးမှာလည်း လေ့လာသင့်သောကိစ္စတခုဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်အတူ တနေ့တခြားကြီးမားလာသော လူတိုင်း၊မိသားစုတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေးစနစ်တို့၏ လုံခြုံစိတ်ချရမှုတို့အတွက်လိုအပ်သော “အာမခံစနစ်” ထူထောင်ပြန့်ပွားရေးမှာ အရေးတကြီးဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ယခုလာမည့် တတိယအကြိမ်လွှတ်တော်များတွင် စီးပွားရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့်ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများကို ဥိးစားပေးဆွေးနွေးကြမည့် အလားအလာများတွေ့ရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူထုနှင့်နိုင်ငံတကာက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပါတ်သက်သော စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကိန်း ဂဏန်းစစ်စစ်များကို စတင်တွေ့ကြရဘွယ် ရှိမည်ဖြစ်သည်။ “အလှူဒါနပြုကြသူငါ” ဟူသော စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံထူထောင်ေ၇းလုပ်ရမည့်အချိန်မဟုတ်တော့ ဆိုသည်ကို နားလည်ကြပြီဟုယူဆရသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ pet project ဖြစ်ပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် စကားအဖြစ်သာတည်ရှိခဲ့သော ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှောချရေးဆယ်စုနှစ်စီမံကိန်းကြီးကား ပြည်သူအားလုံးကမျှော်လင့်တောင့်တကြသော အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ရုပ်လုံးပင်။
လွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ ဖွားဖက်တော်ဖြစ်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်သောင်းကြမ်းမှုကားခေတ်သစ် မြန်မာ့သမိုင်း၏ရာစု (၃)ပုံ(၂)နီးပါးရှိလင့်ကစား၊ သက်ဇိုးရှည်နေခြင်းကားဝမ်းနဲဘွယ်ပင်။ ပင်လုံစာချုပ်၏အားနည်းချက်ဟုဆိုသူတို့ကဆိုကြသော်လည်း၊ လွတ်လပ်ရေးမတိုင်မှီကာလ လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုရာတွင် တခုတည်းသောလက်နက်အဖြစ်အမျှော်အမြင်ကြီးမားစွာမြင်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ကျေးဇူးကြောင့် ယင်းစာချုပ်ကိုချုပ်နိုင်ခဲ့သလို၊ လွတ်လပ်ရေးကိုရခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။ သို့သော်လည်းတိုင်းရင်းသားအတွင်းသာတူညီမျှရေး၊ ဒို့တူဘောင်ဘက်ဥမကွဲသိုက်မပျက်နေထိုင်ရေး ကိုစကားတန်ဆာအဖြင့်သာ ပေးကမ်းခဲ့သော ဗဟိုအစိုးရအဆက်ဆက်ကြောင့်၎င်း၊ နယ်စပ်ဒေသရှိကျေးရွာများကို (၁၉၈၀) နှေင်းပိုင်း မှစ၍ အတင်းအဓမ္မ နှင်ထုတ်နေရာပြောင်းေ၇ွှခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသော ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် နှင့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရှ် refugee camps များကြောင့်၎င်း ပြောင်းရွှေခိုလှုံသူဥိးရေကား တသန်းနီးပါးမျှ ကြောက်ခမန်းလိလိ တိုးခဲ့သည်။ ယခင်န၀တလက်ထက် မအောင်မြင်သော တိုင်းရင်းသားရင်ကြားစေ့ရေးကို၊ လက်ရှိအစိုးရက ဆိုးမွေဆက်ခံရင်း ဆွေးနွေးညှီနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းနှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကြားကြီးထွားဆဲ သံသယကို ခြေဖျက်နိုင်သော တခုတည်းသော ဆွေးနွေးရေးဗျူဟာကား စစ်မှန်သောစေတနာရှိသော ဆွေးနွေးမှုများပင်။ ပြည်တွင်းတွင် ထိမ်းသိမ်းထားသောနိုင်ငံရေးသမားများ အားလွှတ်ပေးယုံမက၊ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးတွက် ပါဝင်လာအောင်လက်ကမ်းကြိုသော နွေးထွေး၍ တမူထူးသော အပြောင်အလဲများကို တိုင်းရင်းသားဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုများကစတင်တွေကြ့ရသည်။ ဤနေရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၀င်ရောက်ရင်ကြားစေ့ရေးကား အလွန်အရေးပါပြီး ဖြစ်သင့်သောကိစ္စဖြစ်သလို သိမ်မွေ့နက်နဲသော ကိစ္စလဲဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေးတယူသန်သော (၀ါ) ရှေ့တန်းတင်လွန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် မိမိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ တကယ်လက်တွေ့ဘ၀အတင့်အမြန်ဆုံးမြင့်မားတိုးတက်ရေးနှင့် လုံခြုံစိတ်ချမ်းမြေ့သော မိသားစုစနစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေးတို့ကို ရှေ့တန်းတင် စဉ်းစားသင့်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသာအဖွဲများအတွင်းအကြီးမား ဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်သော KNU အဖွဲ့ကြီး၏သမိုင်းဝင်သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အတိုက်အခံများနှင့်အတူ၊ နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်သူများက၀မ်းပမ်းတသာ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ယခင်အဝေးရောက်အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်သော ၀န်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစိန်ဝင်း ကလည်း မိမိတို့အစိုးရအဖွဲ့ NCGUB အနေဖြင့်NLD ပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရေးကြေငြာချက်နှင့်အတူ တည်ရှိရန်မလိုတော့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အမှန်ဆိုရသော် အစိုးရဟူသည်မှာပြည်သူအပေါ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရေးဆိုသောအချက်ကား အစိုးရတိုင်းကမျက်ခြေမပြတ်သင့်သော အရေးပါသောကိစ္စပင်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၂ ထုတ် ရတနာပုံနေပြည့်တော်သတင်းစာ တွင်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရေး စီမံကိန်းကြီးတောင် အသံတွေတိတ်နေပါရော့လား..
အခုလုပ်နေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို လက်တွေ့ကျကျအကောင်အထည်ဖော်..
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လည်း သမာသမတ်ကျခဲ့ရင် …
ဘယ်ဘက်ကို မဲပေးရမလဲဆိုတာ သေချာပြန်ပြီးစဉ်းစားရမဲ့ အခြေအနေကို ရောက်သွားနိုင်တယ်.
ကျေးလက်ဒေသဖွံဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရေး ဟာ ရေရှည်လုပ်ရမဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ စီမံကိန်းအသွင်ဖေါ်ဆောင်ရမဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်။ ဒီပွားရေး ဆိုတာမြန်မာမပြောပါနဲ့ အမေရိက လို ဘိုးအေနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ အစိုးရကတောင်အပြောအဆိုအဝေဖန်ခံနေကြရတာ နားနဲ့မဆံ့အောင်ပါ။ စကားလုံးတန်ဆာဆင်ရာမှာ ပြိုင်စံရှားတဲ့ အဆက်ဆက်သော မြန်မာအစိုးရကြောင့် လူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာက ကြီးစွာသော သံသယ နားမျက်စိတို့နဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ ဒီ Rural Development and Poverty Alleviation ဟာ အစိုးရတင်မက လူထုရော ကမ္ဘာ့ဘဏ်လို ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းတွေက စိတ်ရောကိုယ်ပါ လုပ်ကြမှရပါမယ်။ ခုထိတော့ အစိုးရက unilateral approach လုပ်နေသေးတဲ့ လက္ခဏာ သာတွေ့ရပါသေးတယ်။ ဒီကနေ့သတင်းအရ ဒေါက်တာမောက်ခမ်း ရဲ့ ရှမ်းပြည့်နယ် ခရီးစဉ်မှာ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း ကိစ္စ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပြောသွားပုံက – သဘောထားတိုက်ဆိုင်သူ ၄-၅ ဥိေးလာက်နဲ့ စတင်နိုင်ကြောင်းပြောသွားပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ရသလောက် Bangladesh ကစခဲ့တဲ့ Mohammad Eunos ရဲ့ micro-financing ကို မြန်မာအစိုးရပိုင်းက နားဝင်ချိုကြပုံရပါတယ်။ အဲ့ ဒီကိစ္စက 3rd party ကသာ လုပ်သင့်တာပါ။ အစိုးရက လက်ဝင်လျှိုစရာမလိုပါဘူး။ တခုဘဲ ရှိပါတယ်။ ဥပဒေပြဌာန်းပေးပေါ့။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဒီ Pet project ဘယ်ကိုဦးတည်မလဲ ဘယ်သူမှမသိပါ။ ဒါပေမဲ့ အခက်အခဲနားနည်းချက်တွေကတော့ ဒုနဲ့ဒေးဆိုတာမှန်းကြည့်ယုံနဲ့ မြင်လောက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီစီမံကိန်း ဇာတ်မမြုပ်ပါဘူး အစိုး၇အဖွဲ့ဝင်တွေ ပြည်နယ် နဲ့ တိုင်းဒေသကြီအလိုက် လူခွဲ လုပ်နေကြပါတယ်။
အရင်ဆုံး စလုပ်သင့်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဒီဇိုင်းပြန်ပြင်တာပြီး အစိုးရအဖွဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအောင်လုပ်ရမှာကို မလုပ်သေးတာ အံ့သြနေမိတယ်။
မအံ့သြပါနဲ့ အဲ့ ဒီကိစ္စက အတိုက်အခံတွေကြားမှာ အိပ်မက်ကြီးတွေအဖြစ် နှစ်ပရိစ္ဆေဒများစွာ ကိန်းအောင်းနေပါတယ်။ အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေ internet websites တွေမှာ ပလူပျံနေတာကိုကြည့်ပါ။ စပ်စုချင်ရင် မောင်မိုးညို ကတောင် ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ကြားဘူးရဲ့မဟုတ်လား – Utopian state (ဘာတဲ့ – ဆရာပါရဂူက “ဃဏ နိုင်ငံတော်” လို့တောင်သမုတ်ခဲ့သေးတယ်)
အခြေခံရမဲ့ အချက်တွေ က-
(၁) အစိုးရက အရာရာဝင်လက်ဝါးကြီးအုပ် နေရာယူချင်တဲ့ စနစ်ကို ရပ်တန်းကရပ်ကြဘို့၊
(၂) ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားတွေ ကို ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ် ဖန်တီးခွင့် အစစ်အမှန်ကိုပေးဘို့၊
(၃) အညှာတမ်းပြောရရင် de-militarize လုပ်ဘို့ နဲ့
(၄) လုံခြုံစိတ်ချတဲ့ family security ကိုအာမခံမဲ့ ၊ ကာကွယ်ပေးမဲ့ အစီအမံများ တိတိကျကျ ပြဌာန်းပေးဘို့၊
မောင်မိုးညို ရဲ့ ပို့ စ်ကနေ ဒီအချက်လေးကို ….
စစ်တပ်အကြီးအကဲများက တပ်တွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ပြုလုပ်လာကြရန်လိုသည်။ ထို့အပြင်
စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံများကိုလည်း professional ကိုအခြေခံသော ၀န်ထမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အင်အားလျှောချ၍ ကျစ်လစ်ခိုင်မာအောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ လူထုနှင့်စစ်တပ်တသားတည်း မြင်ရန်
ယုံပါဗျာ…။ (၈၈) ကာလ စစ်တပ်က အာဏာရယူတော့ ပျဉ်းမနားမြိုလယ်ခေါင် နေရောင်မပျောက်ချိန် စစ်ကားပေါ်က စစ်သားတွေ အပြေးအလွှားပြေးဆင်းလာပြီး တွေ့ သမျှ လူတွေ ကို သေနတ်တွေ နဲ့ အလန့်တကြားချိန်ကြ တဲ့ စစ်သားတွေ။ အမေတွေ ကလေးတွေ ရရာဆွဲ ပြီး အိမ်ထဲ အလန့်တကြားပြေးကြတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ မျက်စိထဲ ဒီနေ့အထိမပျောက်သေးလို့ပါ။
တမြို့ထဲ နေကြသူချင်း နေ့ချင်းညချင်းမယုံနိုင်ကြရလောက် အောင်နေ့ချင်းညချင်းပြောင်းကုန်ကြတဲ့ စနစ်ဆိုးကြီးပါဗျာ။
ထည်ပေါ်လာရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ တပ်ကလည်း ပြည်သူအပေါ်မလှိမ့်တပတ်လုပ်လို့မရတော့နိုင်သလို
အရပ်သားတွေကလည်း အရေးဟဲ့အကြောင်းဟဲ့ဆို တပ်မတော်သားများကသာ ပြည်သူကိုကာကွယ်ကြတယ်
ဘယ်နိုင်ငံမဆို service selection act/law တွေ ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်နေထိုင်ပေါက်ဖွားတဲ့ မြေ ဒေသ ရဲ့ ကျရောက်လာမဲ့ အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရမဲ့ တာဝန်ဟာ အဲ့ဒီဒေသနေလူထုရဲ့ တာဝန်မဟုတ်လား။ အဲ့ဒီတာဝန်ကို ထမ်းဘို့ စိုးရွံ့ကြသူတိုင်းဆိုပေမဲ့ တပ်မတော်သား ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို (တကယ်သာ လူထုက လေးစားဂုဏ်ယူချင်စရာ ဂုဏ်ဒြပ် လို့ ယူဆခဲ့ရင်) တကယ် တန်ဘိုးထားတတ်တဲ့ အမြင်ရှိလာရင် ဒီပြဿနာရှင်းသွားမှာပါ။
ကျုပ်သံသယဖြစ်တာကတော့ အကြပ်အတည်းနာဂစ်ထဲက ရေးဆွဲထားတဲ့
အကောင်ကြီးကြီးအမြီးရှည်ရှည်တွေက အုံနှင့်ကျင်းနှင့် နေရာယူထားတယ်ထင်တာဘဲ ( အထင် )
ထိပ်ပြောင် သမ္မတဖြစ်လာပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးတာအရမ်းနောက်ကျတာကလည်း
တစ်ကယ့်အကြပ်အတည်းထဲရောက်သွားသူကတော့ အဖွားကြီးနှင့်တစ်ကွသော NLD လို့ထင်တယ်
လက်ရှိအခြေနေတွေနဲ့ NLD လွှတ်တော်ထည်း ဝင်ဘို့အရေး သိပ်သဘောမတွေ့ပေမယ့်
နောက်ဆုံး သူတို့ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုံးဝအုတ်ဿုံထောက်ခံတယ်
အဖွားကြီးက ဝင်အရွေးခံတယ်ဆိုတာ ရှုံးသွားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး
ဒါကို သူတို့သိနှင့်ပြီးသားဘဲ သိလျှက်နှင့်အဖွားကြီးကို ဒီလိုလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာ
ဂယ်လား?? ဦးမောင်မိုးညို ( ဦးလေးလည်းခေါ်ရတယ် မောင်လည်းတပ်ရသေးတယ် တော်တော်ဂွတဲ့လူကြီး )
( ခက်သည်ကား ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်အတွင်း “နာဂစ်”မုန်တိုင်းကြောင့်တနိုင်ငံလုံးနီးပါးကြိမ်မီးအုံမျှ ပူးဆွေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ချိန်၊ အတင်းအဓမ္မနည်းဇြင့် အတည်ပြုခဲ့သော နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းမမှီသော ဖွဲံစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏အားနဲချက်များ၊ ယင်းဥပဒေနဲ့အညီ ကျင်းပခဲ့သောရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံတိုင်းလိုလို “ကြိုတင်မဲ”ဟူသော အစီအမံဖြင့် ဘယ်ကမသိရောက်ရှိလာသော စုပြုံမဲများအရပေါ်ထွက်လာသော အစိုးရသစ်ကို ပြည်သူနှင့်တကွ တကမ္ဘာလုံးက ယုံကြည်နိုင်မှုမရှိသေးချိန်ပင်။ )
သူတို့ အဖွားကြီး လွှတ်တော်ထည်း ဝင်တာကို အရမ်းအလိုရှိနေတယ်ဆိုတာလေးနဲ့
ချိန်ကြည့်ရင် အဖွားကြီးနှင့်တစ်ကွသော အဖွဲချုပ်ကတော့ သေခြာသိနှင့်နေပြီလို့
ကျုပ်တို့ကိစ္စကတော့ ပြည်သူတွေတစ်ခဲတစ်နက်အားပေးထောက်ခံထားတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်က
ဆိုခဲ့ပြီးသလို သူတို့ ကြိုတင်းခိုးထားတဲ့ကြိုတင်မဲတွေနဲ့ ညစ်ပတ်မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာလေးပါဘဲ
နောက်ပြီးအဲ့သည် ဂတုံနဲ့ လူကြီးကပြောလိုက်သေးတယ်
ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေ ဘယ်နေရာကအော်နေတာလည်းလို့ မေးတာလေးတစ်ခု
ကြုံလို့ပြောရရင် ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရခြင်းအကြောင်းလေးပြောပြတာလည်း နှစ်သက်မိပါတယ်
ကိုကြောင်ကြီးပြောတဲ့ ဝယ်ကြအုန်းမလားဖုံးလားဘာလားသိဘူး အဲ့သည်အထည်းက
ငါးထောင်တန် ဖုံးလိုင်း တွေကလည်း ထိပ်ပြောင်တို့ ကြိုတင်မဲခိုးလို့ကောင်းစေမယ့်ဂွင်တစ်ခုလို့
တစ်ပြားမှမကုန်ဘဲ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ အော်ပါတယ်ဗျာ
ကိုကြောင်ကြီးရေ သိုင်းကယူးပါဗျာ ထင်မြင်ချက်လေးအတွက်
ဘကြီးပြောတာက ပြီးသေးပုံမပေါ်သေးတဲ့အတွက် ပြီးတဲ့အထိမှတ်သားပါ့မယ်ဗျာ
ကြိုတင်မဲ၊ (၂၅%) အော်တိုမက်တစ် စစ်တပ်ရဲ့ legislative right နဲ့ (၂၀၁၁) မတိုင်ခင် ဆယ်စု (၂) ခုကျော် တပ်ရဲ့ ထင်တိုင်းကြဲခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေ ချွင်းချက်မရှိ လွတ်စေ ဆိုတဲ့ “မဟာ” အားနည်းချက်တွေ ယုံစရာမရှိနိုင်အောင်ပြည့်နှက်နေတအခြေခံဥပဒေအရပေါ်ထွက်လာတဲ့၊ လက်ရှိအစိုးရ ရဲ့ အနေအထားကို ဘယ်ပုံစံ နဲ့ ဒေါ်စု ဦးဆောင်တဲ့ NLD အမတ်များက ဘယ်ပုံ ဆက်ဆံ ခရီးသွားမလဲ ဆိုတာ အထူးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ လောလောလတ်လတ်ခြေလှမ်းသွက်လာတဲ့ ပြောင်းအလဲလေးတွေ ကတော့ အာတက်စရာတွေပါ။ ဒေါ်စု မန္တလေး လူထုစည်းဝေးပွဲ လုပ်ခွင့် ကို ကြံ့/ဖွံ့ အမာခံ ဗိုလ်ချုပ်ဖုန်းဇော်ဟန်က နေရာအခင်းအကျင်းစီမံပေးလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ က သာမန်ကာရှန်ကာ ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေ မဟုတ်တန်ရာပါဘူး။ ထိပ်ဆုံးကဆင်းလာတဲ့ ကိစ္စတွေ ဆိုတာပြေးကြည့်စရာ မလို၊ တွေးကြည့်ယုံနဲ့ သိနိုင်ကြောင်းပါ။
Now Irrawaddy Blog showing changing position of ဦးဖုန်းဇော်ဟန်,
မန်းမြို့တော်ဝန် နဲ့ ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီး နေရာလဲ
Tuesday, February 28, 2012 Sithu Linn4comments
မန်းမြို့တော်ဝန် ဦးဖုန်းဇော်ဟန်က မန္တလေးအစိုးရအဖွဲ့မှာ ဘဏ္ဍာအခွန် ဝန်ကြီးဖြစ်သွားပါပြီ။
ူသူ့ကို အဲဒီရာထူး ခန့်အပ်ကြောင်း ဒီနေ့သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးမှာ ဦးသိန်းစိန် လက်မှတ်နဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သူ့နေရာကို ၀င်သူက ဦးအောင်မောင်း လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးအောင်မောင်း ဆိုတာ မန္တလေးအစိုးရအဖွဲ့မှာ ဘဏ္ဍာအခွန် ဝန်ကြီးနေရာ ယူထားသူပါ။
ဒါဆို သူတို့ ၂ ယောက်ကို ဦးသိန်းစိန်က နေရာချင်းလဲလိုက်တာပေါ့။
မန္တလေးတိုင်းအစိုးရပိုင်းမှာ ဦးအောင်မောင်း ဘယ်နှစ်ဦး ရှိပါလိမ့် ???
Something happened at behind.
Sorry for my weak point of how to show original link.
ဆရာ ကမိုးညို ရှင့်
( နေ့ရက် လေးများ ဖြင့် ဖြည့် ၍ ) သမိုင်းဖြစ်စဉ်များကို ကော်ပီ လုပ်၍သိမ်းထားပါသည်။
တစ်ချိန်မှာ ပြန်ကြည့်ရမဲ့ အကြောင်းတွေ မို့ ဒီလို မျှဝေ ပေးထားလေး က ကျွန်မ တို့ အတွက် အဖိုးတန်သော Post လေးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်လာမည့် အပိုင်းတွေကိုလဲ စောင့်ဖတ် ပါမည်ရှင့်။
သိမ်းယုံမသိမ်းဘဲ မိန့်စရာလေးတွေ လဲ မိန့်ဘို့ (ဒေါ်) ခင်လတ်ကို တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ဥပမာ – အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဆိုပါတော့ ဗျာ…။
ကျွန်မ ဆုတောင်းမိပါရဲ့။ ဗဟုသုတမှာ ဘက်ပေါင်းစုံ က တော်သူဖြစ်ဖို့။
အခုချိန်မှာတော့ အဲလို မဟုတ်လေတော့ နေရာတိုင်း ဝင် မမိန့်နိုင်တာ အတော် စိတ်ပိန်နေပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ ဒီစာတွေ ဖတ်ပြီး ကိုယ့်လို မသိတွေသူ ကို ပြန်မျှ ဖို့ အဆင့်ဘဲ ရှိ ပါသေး တယ်၊
အဲဒီလို မသိတာ သိလာတာ၊ မတွေးမိတာ တွေးမိလာတာ တွေဟာ ဒီမှာ မန်ဘာ ဖြစ်ရတာ အတွက် ဂုဏ်ယူရမဲ့ အကြောင်းပါဘဲ။
ကျွန်မ စာတွေ ပိုပြီးဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်။
တစ်ခု တော့ ပြောချင်ပါရဲ့။
လက်နက်ကိုင်တပ်မတော် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော် အဖြစ် ပြည်သူတွေက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လက်ခံလာဖို့ အတွက် ကတော့ ပြည်သူတွေ နဲ့ တစ်သားတည်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်း ထဲ နေကြည့် လိုက်ဖို့ပါဘဲ။
ပြည်သူ့ ဒုက္ခ ဟာ ကိုယ့်ဒုက္ခ လို့ စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါဘဲ။
“အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ” ဆိုလို့ငယ်ငယ်တုန်းကတပ်မတော်ကိုသွားသတိယပါတယ်။ ၈၈ မတိုင်ခင်ကနယ်မှာနေတုန်းက ကျွန်မတို့မြို့မှာစစ်တပ်အင်မတန်ပေါတာ။ စစ်သားတွေကိုလဲမြို့ကချစ်လိုက်တာတုန်နေတာပဲ။ ဘယ်တပ်ရှေ့တန်းထွက်သွားပြီ။ ဘယ်တပ်ဘယ်နေ့ပြန်လာမယ်ဆိုတာအမြဲစိတ်ဝင်စားနေတာ။ ထွက်သွားရင်လဲဘေးကင်းဖို့ဆုတောင်းပေးကြတယ်။ ပြန်လာရင်လဲမြို့လုံးကျွတ်ကြိုကြတယ်။ ကျွန်မတို့လဲအဲနေ့ဆိုစာမသင်ရဘူး။ သူတို့ပြန်လာမယ့်လမ်းမှာပန်းတွေနဲ့သွားစောင့်နေရတယ်။ သူတို့မျက်နှာမြင်ရင်သူတို့လဲပျော်၊ကျွန်မတို့လဲပျော်နဲ့။ အရမ်းကိုချစ်ခဲ့ကြရတဲ့အချိန်တွေပါ။ အဲလိုအချိန်တွေဘယ်တော့များမှပြန်ရနိုင်ပါတော့မလဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်အဲဒီအချိန်ကိုပြန်လိုချင်မိတယ်။
ကိုမိုးညိုရေ ……. ကိုမိုးညိုပြောတဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်အခန်းကဏ္ဍဆို တော့ သိသလောက်တော့ပြောပြခြင်သေးသဗျ.. လက်နက်ကိုင်လို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် လက်နက်ကိုင်ပြီး တိုက်ခိုက်တဲ့ နေရာ နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်တဲ့ နေရာမှာဘဲရှိသင့်ပါတယ်… ကျုပ်တို့မြန်မာစကားတခွန်းရှိတယ်မဟုတ်လားဗျာ .. ဘုန်းကြီးလူထွက် တပ်ထွက် တဲ့ ဘာမှသုံးစားမရဘူးဆိုတာလေးပါ .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က တိုက်တာ ခိုက်တာလေးဘဲတတ်တာလေဗျာ .. တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်က သူတို့အလုပ်မှမဟုတ်ပေဘဲ..ကြုံတုန်းလေးပြောပြရအုန်းမယ်ဗျာ ကျုပ်တို့ ရွာမှာ ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက စပျစ်ခြံ ရှိတယ်ဗျ အရမ်းအထွက်ကောင်းတဲ့ စပျစ်ခြံပေါ့။။ အဲဒါလေးကိုစစ်တပ်ကသိမ်းပြီး တပ်ကလူတွေကလုပ်လိုက်တာ စပျစ်သီးမပြောနဲ့ဗျာ အပင်တောင်မမြင်ရတော့ဘူး ခုဆို ..အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ဒူးနေရာဒူး မနေလို့ဖြစ်သွားတာလေးပါ ..ဒါကသာဓက လေးအနေနဲ့ပြောပြတာပါ ။ ဒါကြောင့် စစ်တပ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးမှာဘဲ ရှိနေသင့်ပြီးတော့ တခြားမဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာရှိမနေသင့်ပါဘူး.
မှန်လိုက်လေ Naung Naung ရေ့။ (၁၉၈၉) လောက်က “တပ်တွေ ကိုယ့်တန်းလျားကိုယ်ပြန်ပါ့မယ်” လို့ ပြောခဲ့ တဲ့ ဗိုလ်စောမောင်တယောက် နောက်မကြာမှီ ရက်အတွင်းမှာ “ကျန်းမာရေး” ကြောင့်ဆိုပြီး အနားယူလိုက်ရပါတယ်။ မကြာခင် မာလကသွားတာ တိုင်းသိပြည်သိပါ။
တကယ်တော့ လက်နက်ကိုင် ကာကွယ်ရေးမှ ရှိကြတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ ဟာ ပြည့်သူ့ အခွန်ကိုစားတဲ့ ၀န်ထမ်းများသာဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့တာဝန်က နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ဘို့ပါဘဲ။ ဒီနေရာအမှာ အချုပ်အခြာအာဏာ ဆိုတာ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်မှာ ရှိတဲ့ အစိုးရ ကို အာဏာသက်တမ်းရှည်စေရေးအတွက် ကာကွယ်ပေးရမဲ့ တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရကို ကာကွယ်သူဟာ ပြည်သူ နဲ့ ပြည်သူတွေကပြဌာန်းတဲ့ ဥပဒေသာတွေဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကွာတာက သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်လွှတ်စွန့်စား တာဝန်ထမ်းကြလို့ ဂုဏ်ထူးဝိသေသထူးတခု ရပါတယ်။ အဲ့ ဒီ ၀ိသေသက hero ဆိုတဲ့ ရတောင့်ရခဲ ဂုဏ်ပုဒ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီဂုဏ်ပုဒ်ဟာ စစ်တပ်ရဲ့သေနပ်ပြောင်းဝ လူထုဖက်လှည့်လိုက်တာနဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ မျက်ခြေမပြတ်မိကြဘို့ စစ်ခေါင်းဆောင်တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိ်ပါတယ်။
၁၉၈၉) လောက်က “တပ်တွေ ကိုယ့်တန်းလျားကိုယ်ပြန်ပါ့မယ်” လို့ ပြောခဲ့ တဲ့ ဗိုလ်စောမောင်တယောက်
နောက်မကြာမှီ ရက်အတွင်းမှာ “ကျန်းမာရေး” ကြောင့်ဆိုပြီး အနားယူလိုက်ရပါတယ်။ မကြာခင်
ကွန်းမန့်ရေးဖို့ ပြင်လိုက်ပြီး ဘာရေးရမှန်းမသိတာနဲ့
ပြန်ပြန်ထွက်သွားရတာ တော်တော် ကြာပါပြီ။
စစ်တပ် အကြောင်းပဲ ၀င်ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်။
တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှု နည်းပါး (အိုင်ကျူနိမ့်)လွန်းသော
ရဲဘော်တွေရဲ့ တွေးခေါ် မျှော်မြင်နိုင်စွမ်း မြင့်တက်လာအောင်
စစ်တပ်ထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့ အဆင့်တိုင်းကို
ချွေးထွက်များမှ သွေးထွက်နည်းမယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့
ကိုယ်ခန္ဓာအားပြု အသုံးချနိုင်ဖို့ လက်ရုံးရည်ကို ပြင်ဆင်ပေးသလို
ဦးနှောက်ကို အသုံးချနိုင်ဖို့ နှလုံးရည် ကိုပါ ပြင်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်။
အဲဒီလို တွေးတတ်ခေါ်တတ်တဲ့ ရဲဘော်တွေကိုရော
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက အုပ်ချုပ်ရခက်တယ်လို့ သဘောထားသလား
(တွေးတတ်သလောက် ၀င် ဆွေးနွေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ)
ဗိုလ်မှူးချုပ်နဲ့ အထက်အဆင့်များကိုမွမ်းမံသင်တန်းများပေးတဲ့ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်၊ (ဥစတ လို့ခေါ်တဲ့) ဗိုလ်မှူးကြီး နဲ့ အထက်အဆင့် ကိုသင်တန်းပေးတဲ့ စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်၊ ဗိုလ်လောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ငယ်များတိုသင်ကြားဘွဲ့ပေးတဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်၊ ဗထူးမြိုးအကြပ်သင်တန်းကျောင်း နဲ့ အခြားတတ်ကျွမ်းမှုဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များ အပြင် စစ်တိုင်းကြီးများနဲ့ တပ်မဌာနချုပ် သင်တန်းကျောင်းများစွာတို့ လည်းရှီပါတယ်။ သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ အဲ့ဒီဌာနကြီးများအခြေတကျရှိပြီးပေမဲ့လည်း အရေအတွက်ကိုသာ ဦးစားပေးခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာတွေကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့အရည်အသွေး ကျဆင်းစေလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂)နှစ်အတွင်းမှာ အဲ့ ဒီသင်တန်းကျောင်းတွေရဲ့သင်ကြားပုံနည်းစနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ သင်ကြားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆရာတွေကို ပြည့်ပလေ့လာရေးများထိထိရောက်ရောက်ပို့ပြီးလေ့လာစေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေရလာတဲ့ တခုတည်းသောအဖြေက မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုဒီအတိုင်းဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။ ခေတ်မှီပြီး professional အသွင်ပြောင်းဘို့ ဗိုလ်သန်းရွှေ လက်ထက်ကတည်းက စီမံခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်တဲ့ ရာပြည့်၊ ကျော်ဆွေ၊ စိုးဝင်း၊ သောင်းအေး တို့အပြင် တိုင်းမှူးအတော်များများဟာ အဲ့ ဒီ တပ်မတော်ပညာသင်ကြားရေး ပြောင်လဲမှုဆိုင်ရာများကို ဦးဆောင် လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေ တက်လာသူတွေကို လဲ dissertation တွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်သွင်းခွင့် ပြု ယုံမက အားပေးမှုတွေတောင်လုပ်နေပါပြီ။ ဆိုတော့…..လုပ်ရမဲ့ အပိုင်း (တကယ်တော့ ကြီးမားတဲ့ အပိုင်းပါ) တခုဘဲကျန်ပါတယ်။ အဲ့ ဒါကိုတော့ ဒီဆောင်းပါးရဲ့တနေရာမှာ မသိမသာ “မညှာတမ်း” ထောက်ပြထားပါတယ်။ MG ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပါရောက်လို့ သိပ်လှစ်မပြချင်ပါဘူး။ ကြည့်တတ်သူမြင်၏..လို့ hint ပေးပါရစေ။
hint ပေးထားတယ်ဆိုလို့ မတွေ့မချင်း နှစ်ခေါက်လောက်တောင် ပြန်ဖတ်တာ ရေးတေးတေးလေးတော့ တွေ့သား။
ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့ မသိဘူး။ ဟီးရိုးဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလား ။ လောလောဆယ်တော့ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်အုန်းမယ်မထင်ဘူး။ ကျမလို သာမာန်ပြည်သူတယောက်ရဲ့ အမြင်မှာတော့ အဲ့လို အမြင်မျိုး ဖြစ်ဖို့ အတော်ခက်နေပါသေးတယ်။
ဒဏ်ရာတွေက နက်ပါတယ်။ ကျက်အောင်တောင် မနည်း ကုထားရတာပါ။
သူတို့ တကယ်အဲ့လို့ ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကြီးကလည်း အတော်လေးကို ပြောင်းလဲမှရမှာပါ။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ခုထိတော့ ဝေးနေပါသေးတယ်။
အသိမမှားရင်.. မြန်မာစစ်တပ်က.. တော်တော်လေး.. ပရိုတန်းလုပ်နေနိုင်ပါတယ်..။
ရှေးဘုရင်သက်ဦးဆံပိုင်ခေတ်တွေက.. အုပ်ချုပ်ပုံတွေလည်း.. အထပ်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်ထားကြတာ…။
ဒီလိုနဲ့.. မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့..အားနည်းချက်ကို.. ကောင်းကောင်းသိနေခဲ့တယ်..။
ဒါကြောင့်.. ဒီလိုနေရာကိုယူထားနိုင်တာလို့.. ရိုးရိုးလေးမြင်မိပါတယ်..။
… အ၀ါလူတန်းစားနဲ့.. သက်ဦးဆံပိုင်နန်းတွင်း…အပြန်အလှန်အညမညသဘောတရားတွေ .. သေသေချာချာကြည့်ပြီးမှ.. အစိမ်းလူတန်းစားကို.. မွေးထုတ်ယူလိုက်တာလို့.. မြင်မိပါတယ်..။
၀ိုင်းသမဦးမှာမို့.. ဒီလောက်ပဲ.. လှစ်ပြလိုက်ပါကြောင်း..။
သူကြီးပြောပြောနေတဲ့ အ၀ါ ရယ် အစိမ်းရယ် သက်ဦးဆံပိုင်ရယ်ကို သူကြီး အမုန်းခံပြီး ပြောပြောနေလို့ အထပ်ထပ်အခါအခါ စဉ်းစားကြည့်တွေးကြည့်လုပ် မိတယ် ။ ရေးရေးလေးတော့ တွေ့မိသလိုပဲ။ သို့သော် သူကြီး ပြောသလိုတော့ လက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တွေးရုံတွေးကြည့်တာ ။ သူကြီးကတော့ ဇိမ်ဘုန်းကြီး အကြီးစားဆိုတော့ ပြောပေါ့လေ ။